Mkpụrụ osisi okpomọkụ na-ekpo ọkụ Mkpịsị aka Germination Propagation Clone China Manufacturer
Nkọwa:Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Ọkụ Mkpụrụ,Mkpokọta osisi germination na-ekpo ọkụ,Mkpokọta Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ nke Germination
Home > Ngwaahịa > Nkịtị Nkịtị Na-emepụta Ihe > Ihe eji emepụta ihe eji emepụta ihe > Mkpụrụ osisi okpomọkụ na-ekpo ọkụ Mkpịsị aka Germination Propagation Clone
Ihe Nlereanya.: XHC-F005B-5
Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpịsị Ugbo Mkpokọta Germination Propagation Clone
• Mkpụrụ ọkụ na-amị mkpụrụ maka ka eto eto na mkpụrụ osisi germination
· Gburugburu mgbọrọgwụ mpaghara 10 ruo 20 ogo n'elu okpomọkụ
• Na-eme ka ihe dị mma nke seedlings na cuttings, na-adịgide adịgide, na-ehicha mmiri ma dị mfe
• Enwere ike itinye ya n'ụdị dị iche iche nke mkpụrụ osisi Preded.
• Bịa na ike Onye nchịkwa nke dabara na mba gị hụrụ n'anya
Akụkụ: Otu. 300 * 400mm
Standard: Austrilia nkwụnye
Cheta: Ihe anyị rere ya bụ plug AU. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ya na UK / EU / US, ịkwesịrị ịzụta US na UK / EU / US converter mbụ.
· Agba: Nwa
Ihe onwunwe: PVC
Ogologo ogologo: 170cm
1. Biko Chọta ebe dị mma ma dị ala nke kwesịrị ekwesị maka akụrụ ọkụ gị,
• na-ezere ala oyi, ha ga-egbochi ike ikpo ọkụ nke ọkụ ọkụ.
2. Biko gbanye eriri eletrik ọkụ na teepu 120V.
3. Biko tinye tray na-agbasa ma ọ bụ ihe ọkụkụ ndị ọzọ na ọkụ ọkụ. Maka nsonaazụ kacha mma, kpuchie seedlings / cuttings na dome iru mmiri.
1. Biko ekwela ka ikpo ọkụ na-agbanye mmiri ma ọ bụ mmiri ọ bụla ọzọ.
3. Biko etinyela okpukpu ọkụ n'elu ebe siri ike ma ọ bụ nke a kapịrị ọnụ, ebe nke a nwere ike imebi ya.
Ụlọ ọrụ na-ere ọkụ eletrik na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-emepụta ihe Kpọtụrụ ugbu a
Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Ọkụ Mkpụrụ Mkpokọta osisi germination na-ekpo ọkụ Mkpokọta Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ nke Germination Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Cassia Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Ọkụ Na-agha Ihe